मानिसकै कर्तुतले जैब–प्रजातिहरु मासिदै
२०७६ असार ७ गते , शनिवार प्रकाशित
हाम्रो जीब मण्डल एउटा बिशाल भवन जस्तै हो । हामी मानिस यो भवनको सबबैभन्दा माथिल्लो तलमा बसेका छौं) । यदि हामीले यस भवनबाट जीवहरुका केही प्रजातिहरुलाई मेटाउँदछौ भने पनि त्यो भवनबाट त्यसका केही ईटा हराउने जस्तै मात्रै हो । भवन त फेरि पनि खडा रहेकै हुन्छ । तर यदि लाखौ लाखको संख्यामा जीव प्रजाति हराउन थाल्दछन् भने जीव मण्डलरुपी यो भवन धराशायी हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । यस स्थितिमा यदि यो भवन ढल्दछ भने सबैभन्दा माथिको तलामा बसेको यो मानब जातिकै लोप हुने र अस्तित्व मेटिने र यसरी सबैभन्दा बढी खतरामा पर्ने छ । यस कारण आज संसारभरी कै सम्पूर्ण बैज्ञानिकहरु र मानबताका पक्षपातीहरु जैब–प्रजातिहरुमाथिको खतरालाई लिएर एकदमै चिन्तिमा रहेको देखिदै आएको छ । बितेको ६ मईका दिन जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघ र १६२ देशहरुको समर्थनबाट तयार पारिएको एउटा आकलन प्रतिबेदनमा के भनिएको छ भने मानिसले नै उसको प्रकृतिलाई बेहद किसिमले अत्यन्तै तीब्र गतिमा नष्ट पारिरहेको छ । जुन प्रकृतिमाथि उसको अस्तित्व निर्भर छ । मानिसका कर्तुतले गर्दा उदाहरणका लागि जलवायु परवर्तन, प्राकृतिक संसाधनहरुको अत्याधिक दोहन, प्रदुषण तथा बन जंगलको अन्धाधुन्ध कटाई आदिको कारणले जैब तथा अन्य पदार्थले समस्या भोगिरहेका छन् ।
त्यस प्रतिबेदनमा प्रकृति र पारिस्थितिकी (नेचर एण्ड इको–सिस्टम)प्रणालीमाथि आर्थिक बिकासको प्रभावका बारेमा बिशेषरुपले बिश्लेषण गरिएको छ । त्यो प्रतिबेदन जारी गर्ने समूहका अध्यक्ष रबर्ट वाटसनले भनेका छन् – ‘‘इकोसिस्टमको स्वास्थ्य जसमाथि हामी र अन्य सबै प्रजातिहरु निर्भर छौं, पहिलाभन्दा धेरै तीब्ररुपले खराब हुँदै गइरहेको छ ।हामीले आफ्नो अर्थब्यवस्था, आजीबिका, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र जीवनको गुणबत्ताको जगलाई नै मेटाउन लागिरहेका छौ ।’’ बितको १०० बर्षमा रीडधारी प्राणीहरुका २०० प्रजातिहरु बिलुप्त भइसकेका छन् । अर्थात प्रति बर्ष सरदर कम्तिमा दुइ प्रजातिहरु बिलुप्त भइरहेका छन् । तर यदि बितेको २० लाख बर्षमा जैबिक बिलुप्तिको दरलाई हेर्ने हो भने २०० प्रजातिहरु बिलुप्त हुनमा सय होइन १० हजार बर्ष लाग्नु पर्ने थियो । त्यस प्रतिबेदनमा यस कुराभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर के चेतावनी दिइएको छ भने पशु र बोट बिरुवाका लगभग १० लाख प्रजातिहरुमाथि बिलुप्त हुने खतरा मडारिइरहेको छ । तीमध्येमा हजारौ प्रजातिहरु आउने दशकहरुमा बिलुप्त हुन गइरहेका छन् । त्यस प्रतिबेदनको आकलनमा बिलुप्त हुने अहिलेको दरलाई अहिलेसम्मको मानब इतिहासमा सबैभन्दा बढी दरको बताइएको छ । यसमा उदाहरणका लागि महुरीका प्रजातिहरु लोप भएको कुरालाई नै लिन सकिन्छ । यी महुरी नहुँदा परागण हुदैन । बाली नाली र बोट बिरुवा उम्रदैनन् र बोट बिरुवा नहुँदा या नरहँदा कार्बनडाई अक्साईडलाई अक्सिजनमा कसले बदल्छ ? अनि मानिस र अन्य प्राणीहरुले श्वास कसरी फेर्न सक्दछन् ?
यस कारण यस्ता कयौं प्रकृया छन् जसमध्ये कुनै एउटा जीव गायब हुँदा अप्रत्याशित र अकल्पनीय परिणाम झेल्न पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्तछ । यस सन्दर्भमा गएको बर्ष ‘प्रासिडिङ्गस् अफ दि नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेज’ जर्नलमा प्रकाशित एउटा अध्ययनमा के दाबी गरिएको थियो भने पृथ्बी एउटा अर्को नियन्त्रण जैबिक बिलोपन घटनाको चपेटामा छ । यो नियन्त्रण जैबिक बिलोपन त्यस घटनालाई भनिन्छ जुन घटनाको क्रममा धरतीमा रहेका ७५ देखि ८० प्रतिशत जीबजन्तुहरुका प्रजातिहरु बिलुप्त भएर जान्छन् । अहिलेसम्म पृथ्बीले यस्ता नियन्त्रण बिलोपनका पाँच घटनाहरु झेलिसकेको छ । त्यस अध्ययनले के पनि बताएको छ भने हामी त्यस्तो छैठौं बिलोपनको चपेटामा प्रबेश गरिरहेकाछौं । के सन्देह गरिदै छ भने अब यसको चपेटामा मानिसहरु पनि पर्नेछन् । यसै किसिमको घटना आजभन्दा ७ कारोड ५० लाख बर्ष पहिला पनि भएको थियो । त्यतिबेला सम्भबतः एउटा उल्का पिण्डसँग टकराउन परेकोले यो धरतीबाट डायोनासोर बिलुप्त हुन पुगेको हुनुपर्छ भनिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहलाई दिएका कारण अस्तव्यस्त - गुरुङ
मानिस र मसान घाटको भयको मान्यता